Balsamic မုန်လာဥ | မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
မာရီယာ vazquez | 02/01/2022 10:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 28/12/2021 22:37 | အပေါင်းအဖော်
ကတိထားသောအရာမှာ အကြွေးဖြစ်သည်။ မနေ့က မှောင်မိုက်တဲ့ နောက်ခံကို ပြင်ဆင်ပြီး သူ့ရဲ့ အချက်အပြုတ် အသုံးအဆောင်တွေအကြောင်း ပြောနေရင်းနဲ့ ဒီနေ့တော့ ဒါကို ပြင်ဆင်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်၊ ဘေးထွက်အဖြစ်အစေခံရန်စုံလင်သော balsamic shallots ဤခရစ်စမတ်တွင် မည်သည့်အသားနှင့်မဆို။ ပြီးတော့ သူတို့က ဒီမှာ!
ရှိခြင်း နောက်ခံအမှောင် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား၊ အပ်ချုပ်၊ သီချင်းဆိုမယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 35-40 မိနစ်ကြာလိမ့်မည်။ သူတို့ကို အဆင်သင့်ရှိနေစေကာမူ နောက်ဆုံးမိနစ်တွင် သင့်ကိုယ်သင် မလွှမ်းမိုးချင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ အကြံပေးချက်မှာ ၎င်းတို့ကို ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ မနက်ခင်းနဲ့ နေ့လယ်စာစားချိန်တွေမှာ ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တာက အပူဒဏ်ခံပြီး အရသာရှိတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ လေလုံတဲ့ပုံးထဲမှာ ထည့်ထားရင် နှစ်ရက်လောက်ကြာမှ အရသာခံနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် နံပြား သို့မဟုတ် အင်တီကော်တီဖြင့် ပြီးပြည့်စုံပြီး ဘေးထွက်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါ လူတစ်ဦးစီအတွက် စံပြပေးဆောင်မှု နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် များများလုပ်ဖို့လိုရင် ပမာဏကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
ငံပြာရည်ထဲတွင် Caramelized shallots များ
ဤ balsamic မုန်ညင်းစေ့များသည် အနီရောင်အသားများအတွက် ကောင်းမွန်သော တွဲဖက်ချက်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပါတီပွဲ၌မဆို ၎င်းတို့နှင့်အတူ လိုက်ဖက်ကောင်းမွန်သည်။
Balsamic ရှာလကာရည် တစ်ဖြန်း
200 ml အမှောင်နောက်ခံ (စာရွက်ကိုကြည့်ပါ)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြက်သွန်မြိတ်များကို အခွံခွာပြီး အညိုရောင်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာပါက ထောပတ်နှင့် အလယ်အလတ်/အပူမြင့်သော ဒယ်အိုးတစ်လုံးတွင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အနည်းငယ် caramelize ရန် 10-15 မိနစ်ခန့်။
ထို့နောက် ကျနော်တို့သကြားထည့်သွင်း ပြီးလျှင် အညိုရောင်ကို မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ထားပါ။
ထို့နောက် မုန်လာဥနီကို လုံးလုံးနီးပါး ဖုံးအုပ်ထားသင့်သော balsamic vinegar နှင့် မှောင်သော နောက်ခံကို လောင်းထည့်ပါ။ ၁၀ မိနစ်အလယ်အလတ်အပူဖြင့်ချက်ပြုတ်ပါဆူသဖြင်.
မိနစ် 20 ကြာပြီးနောက် ကြက်သွန်နီများ အလွန်နူးညံ့လာပြီး ငံပြာရည် ထူလာပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသားများနှင့် ပူသော balsamic shallots ကို ကျွေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » အပေါင်းအဖော် » Balsamic မုန်လာဥနီ